By Sid3November 2017
သူ့ရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံက Allen Neal Jones ပါ၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂ ရက်မှာ မွေးတယ်၊ နပန်းသတ်တော့ A.J. Styles အမည်နဲ့ ထိုးသတ်တယ်၊ လူတိုင်းက သူ့ကို စတိုင်းလ် ဆိုပြီၤး သိကြတယ်၊ WWE ဆိုတဲ့ နာမည်ကျော် အမေရိကန် နပန်းပွဲစဉ်တွေထဲမှာ Smack Down နဲ့ အတူစာချုပ် ချုပ်ဆို ထိုးသတ်နေတဲ့ နပန်းသမားပါ။ အခုနောက်ပိုင်း တက်သစ်စလို့ ဆိုရမယ့် နပန်းသမားတွေ ထဲမှာတော့ ခံနိုင်ရည်ရှိရှိ၊ ထိုးသတ်ဟန် သန့်သန့်ကြောင့် လူကြိုက်များလာသလို သူ့ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် အတွက် နာမည်ကျော် နပန်းသမားတွေ ဖြစ်တဲ့ ဂျွန်စီနား၊ ရန်ဒီအော်တွန်၊ ဘရော့လီစနာတို့ထက် ပိုကောင်းတဲ့ အကောင်းဆုံး နပန်းသမား အဖြစ် Wrestling Observer Newsletter က သူ့ကို ရွေးချယ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် အသက် ၄၀ ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ စတိုင်းလ်က မြောက်ကယ်ရိုးလိုင်းနားသား၊ အခုတော့ ဂျော်ဂျီယာမှာ နေထိုင်နေသူ၊ အိမ်ထောင်သည် တယောက်၊ ၂၀၀၀ခုနှစ်ကတည်းက Wendy Jones ကို လက်ထပ်ခဲ့တယ်၊ သားသမီး ၄ ယောက်ရဲ့ ဖခင်ပေါ့။ အရင်တုန်းက Air Styles, A.J. Styles, AJ Styles, Mr. Olympia အမည်တွေနဲ့ နပန်း ထိုးသတ်ခဲ့ဖူးပြီး အခုတော့ စတိုင်းလ် အမည်နဲ့ ထိုးသတ်နေသူပါ။
အရပ် ၅ ပေနဲ့ ၁၁ လက်မ၊ အလေးချိန် ၂၁၈ ပေါင်ပဲ ရှိတယ်၊ WWE နပန်းလောကမှာတော့ အရပ် ၆ ပေနဲ့ ပေါင် ၂၄၀ လောက်မှ အကောင်းဆုံး လက်စွမ်းပြအောင်မြင်တဲ့ နပန်းသမား တယောက်ရဲ့ အရပ်အမောင်းနဲ့ အလေးချိန် ပျမ်းမျှ ဖြစ်ပေမယ့် အခုတော့ သူက တခြားနပန်းသမားတွေနဲ့ စာရင် လူကောင်းနည်းနည်းသေးနေတာပါ၊ ဒါပေမယ့် ထိုးသတ်မှု လက်စွမ်းကောင်းကောင်း ပြသနိုင်က အားရစရာပါ။
၁၉၉၈ ခုနှစ်လောက် ကတည်းက နပန်းလောကထဲ ရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာတော့ သူ့ ဘ၀ အတွက် ပထမဆုံး ခါးပတ်ကို စရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ခါးပတ်က WWE နဲ့ ပြိုင်ဘက် နပန်းပွဲစဉ် တခု ဖြစ်တဲ့ WCW ရဲ့ World Championship Wretling ခါးပတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ နပန်းထိုးသတ်ဟန် ကြမ်းတမ်းတဲ့ TNA (Total Nonstop Action Wrestling) ဘက် ရောက်သွားပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်ထိအောင် TNA မှာ ကစားနေခဲ့တာပါ။ TNA မှာ ကစားနေချိန် အတွင်း စတိုင်းလ် တယောက် World Heavyweight Championship ကို ၃ ကြိမ်ရခဲ့သလို TNA World Heavyweight Championship ကိုလည်း ၂ ကြိမ် ရခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
ပြီးတော့ X Division ခါးပတ်ကိုလည်း ပထမဆုံး ရယူနိုင်ခဲ့သူပါ။ ဒီတော့ စတိုင်းလ်တယောက် TNA မှာ ခါးပတ် ၆ ခု ရယူနိုင်ခဲ့တာ ပါ။ TNA ကနေ ပေးတဲ့ Triple Crown ကိုလည်း ၅ ကြိမ်ရသေးတယ်၊ TNA Grand Slam ကိုလည်း ၂ ကြိမ် ရပါသေးတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က စပြီး Pro Wrestling Illustrated ကနေ ဖော်ပြတဲ့ PWI 500 ဆိုတဲ့ နှစ်စဉ် အကောင်းဆုံး နပန်းသမား စာရင်းမှာလည်း TNA ကစားသမားတွေထဲက နံပတ် ၁ ဖြစ်လာပါတယ်။
၂၀၀၂ ကနေ ၂၀၀၆ ခုနှစ် အတွင်း WWE မှာ King of the Ring ပွဲစဉ်လို နာမည်ကြီးတဲ့ TNA ရဲ့ Ring of Honor ပွဲတွေမှာ နှစ်တိုင်း ပါဝင်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ စတိုင်းလ်တယောက် အာရှကို ရောက်လာပါတယ်။ New Japan Pro Wrestling (NJPW) နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ပြီး ဂျပန်မှာ နပန်းလာ ကစားတယ်၊ အဆိုပါ ဂျပန်မှာ ကစားချိန် အတွင်း IWGP Heavyweight Championship ခါးပတ် ၂ ကြိမ်ရတယ်၊ Bullet Club ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ လေ့ကျင့်ဖက် အဖွဲ့မှာတော့ သူက အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၂ နှစ်လောက် ဂျပန်မှာ ကစားပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နပါရီမှာ အမေရိကန်ကို ပြန်ပြီး အခြေချလာသလို WWE နဲ့ စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ Royal Rumble ပွဲစဉ်မှာ စပြီး ပါဝင်လာတယ်၊ ဧပြီလအတွင်း ပရိတ်သတ် အများဆုံးရရှိတဲ့ နပန်းသမား စာရင်းမှာ ပါလာသလို စက်တင်ဘာလမှာတော့ Backlash ပွဲစဉ် အတွင်း WWE ခါးပတ်ကို ရယူနိုင်ခဲ့သလို အခုနှစ်ဆန်း ပိုင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ Royal Rumble မှာလည်း အနိုင်ရထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အတွင်း WWE ကို ခြေချတဲ့ တနှစ်တာ ကာလမှာ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး လက်စွမ်းပြထိုးသတ်နိုင်တာကြောင့် Wrestling Observer Newsletter ရဲ့ တနှစ်တာ အကောင်းဆုံး နပန်းသမား အဖြစ် သတ်မှတ်မှု ခံခဲ့ရတာပါ။ ဒါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် အတွင်း အမေရိကန် ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ၂ ကြိမ် ရယူနိုင်ခဲ့တာ ကြောင့်လည်း ပါနိုင်ပါတယ်။
ကစားသမား သက်တမ်းတလျှောက် TNA, ROH, NJPW နဲ့ WWE တွေမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့သမျှ ကာလအတွင်း စုုစုပေါင်း ချန်ပီယံခါးပတ် ၂၆ ခု ရယူထားနိုင်တာ တွေ့ရပြီး ဒီထဲမှာ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ် ၈ ခု ပါနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နာမည်ကျော် နပန်းပြိုင်ပွဲ NWA, TNA, IWGP နဲ့ WWE တွေမှာ ပြိုင်ပွဲ အသီးသီးအလိုက် ခါးပတ် ရယူထားနိုင်သူ တဦးတည်းသော နပန်းသမားအဖြစ်လည်း မှတ်တမ်း ဝင်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စတိုင်းလ်က နပန်းထိုးသတ်မှု တခုတည်း လုပ်ကိုင်နေသူ တယောက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ အခြား ပါဝင် လှုပ်ရှားမှုတွေ အဖြစ် ၂၀၀၉ ခုနှစ်က Made ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ နည်းပြ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ဖူးတယ်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ထွက်ရှိတဲ့ အဆိုတော် Sarah Darling ရဲ့ Something to do with your hands မှာလည်း Mr.Handy အဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သေးတယ်။
နပန်းအားကစားမှာ လူကြိုက်များမှုနဲ့ အတူ နပန်းဗီဒီယိုဂိမ်းတွေ ဖန်တီးမှုမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထွက် TNA Impact! ဂိမ်းမှာ နပန်းကစားသမား တယောက် အဖြစ် ရွေးချယ် ကစားနိုင်အောင် ဇာတ်ကောင် ထည့်သွင်းဖန်တီးမှု ပါရှိခဲ့တယ်၊ အဆိုပါ နှစ်မှာပဲ Pro Wrestling X ဂိမ်းမှာလည်း နည်းပညာပိုင်း ပါဝင် ဖန်တီးသူ အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် TNA Wrestling ဂိမ်းမှာ စတိုင်းလ်အမည်နဲ့ နပန်းဇာတ်ကောင် ပါလာတယ်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ထွက် TNA Impact Cross the Line၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထွက် TNA Wrestling Impact!၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထွက် WWE 2K17 နဲ့ အခု နောက်ဆုံး ထွက်ရှိထားတဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထွက် WWE 2K18ဂိမ်းတွေမှာလည်း စတိုင်းလ်အမည် နပန်းဇာတ်ကောင်ကို ထည့်သွင်းဖန်တီးထားတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
Topics: နပန်းသမား အေဂျေ စတိုင်းလ်